बिमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका आफ्ना नागरिकको सम्बन्धमा बंगलादेश सरकारले राख्यो यस्तो माग, मृतकको शब नबुझ्ने अडान ! - Enepal Serofero
बिमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका आफ्ना नागरिकको सम्बन्धमा बंगलादेश सरकारले राख्यो यस्तो माग, मृतकको शब नबुझ्ने अडान !
काठमाडौ ,फागुन ३०/ बंगलादेशले अफ्ना देशका नागरिकको शव पहिचान नभएसम्म शव नबुझ्ने भएको छ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको युएस बंगला विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका नागरिकको शव जसरी पनि पहिचान गर्नुपर्ने बंगलादेशले माग गरेको छ ।
Prevआफ्नो बिमान दुर्घटनाको सम्बन्धमा यूएस बंगलाले विमानस्थलको टावरमा बस्ने कर्मचारीलाई लगायो यति ठुलो आरोप, आखिर के हो सत्यतथ्य ?
Nextबाहिरियो यस्तो डरलाग्दो खबर : बंगलादेशबाट नेपालमा उडान भर्नअघि विमानका पाइलटले राजीनामा गरेका थिए, किन यस्तो गरे हेर्नुहोस् भित्रि कारण